kedu ihe HDMI 2.1 Nkowa; | Huachuang Elektrọnik
Nyocha HDMI 2.1
Nkọwapụta HDMI® 2.1 kachasị ọhụrụ maka nkọwapụta HDMI ma kwado ọtụtụ mkpebi vidiyo dị elu na ọnụego ume ọhụrụ gụnyere 8K60 na 4K120, yana mkpebi ruo 10K. A na-akwado ụdị HDR na-agbanwe agbanwe, ikike bandwidth na-abawanye ruo 48Gbps.
Ingkwado bandwidth 48Gbps bụ Ultra High Speed ​​HDMI USB. Eriri a na ana achikota igwe ojii nke na-agbanwe ihe di egwu tinyere vidiyo 8K anapughi HDR. Ọ nwere EMI obere (nnyonye oku elektrik) nke na -ebe ndabichi na ngwaọrụ ikuku dị nso. Eriri bu azu azu dicha ma aghakwaa were ya na ntinye nke HDMI ngwaọrụ.
Ngosipụta HDMI 2.1 atụmatụ ya gụnyere:
Mkpebi vidiyo kachasị elu na-akwado ọtụtụ mkpebi dị elu na ọnụego ume ọhụrụ ngwa ngwa gụnyere 8K60Hz na 4K120Hz maka ikiri immersion na nkọwa zuru oke ngwa ngwa. A na-akwado mkpebi ndị ruru 10K maka AV azụmahịa, yana iji usoro mmepụta na ọpụrụiche pụrụ iche.
Nkwado HDR dị omimi na-eme ka oge ọ bụla nke vidiyo gosipụtara na ụkpụrụ ya maka ịdị omimi, nkọwa zuru oke, nchapụta, ọdịiche na agba agba agba gburugburu-na onyonyo na ntanetị ma ọ bụ ọbụlagodi nke usoro.
Igwe eji egwu HD High Speed ​​HDMI USB na-akwado bandwidth 48G maka nkwado njikwa atụmatụ HDMI na-enweghị mgbakọ. Ngwaọrụ a nwekwara atụmatụ EMI dị ala ma nwekwaa azụ azụ dakọtara na ụdị nke HDMI Nkọwa HDMI enwere ike iji ya na ngwaọrụ HDMI dị adị.
Igwefoto HDMI Igwe Ọdụdọ HD na Label